Namuhla sizoxoxa kanjani ukwenza ikhofi. Indlela elula kakhulu futhi elula kakhulu yenza isiphuzo ekhaya - sebenzisa idivaysi elikhethekile okuthiwa i-French-cindezela.
Indlela yokusebenzisa lesi ithuluzi futhi lokho elikumelelayo? Igama ngokwayo ngempela ezithakazelisayo. Idivayisi empeleni kabi. French-cindezela - esitsheni ingilazi nge ikhofi zokuhlunga. It yasungulelwa ukukhiqiza isiphuzo esebenzisa ukumnika kanye isizinda.
Esitolo hardware wanikelwa ukudayiswa ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili. Umsuka ikhofi French akulutho ngaphandle isitsha ingilazi ne piston ngesimo anezikhala, ngokuchofoza okuyinto ketshezi wahlukana ngezizathu. Umgomo we wesenzo ayikashintshi kuze kube yilolu suku. Futhi ngokusobala amamodeli okuqala azihlukile kakhulu kusukela lanamuhla.
Kuthiwa-French-cindezela kusungulwe endaweni ethile engumFulentshi ekuqaleni kwekhulu nesishiyagalolunye. Khona-ke lo ikhofi ukwenziwa indlela elula. Njengenjwayelo, kokusungulwa uqobo kwaba ngengozi. Indaba uya abantu ubilise amanzi ngaphambi kokwengeza ezinhlamvwini zekhofi. Kusobala ukuthi uye wabonakala. Ukuzama ukuhlanza ukungcola kusukela isiphuzo, le engumFulentshi sanquma ukuba sisebenzise strainer ucindezele phansi ngezizathu ikhofi kuze kufike phansi. Yiqiniso, umklamo yakamuva kudivayisi kushintshiwe.
Umklamo silula. Idivayisi yakhiwe ngesikhwama isibani, ngokuvamile ezenziwe ngengilazi. Lokhu kwenziwa ukuze alenze esilungele ukuba bagcine inqubo yokuphisa. Ngaphezu kwalokho, idivayisi has a piston nge isibambo ezincane kanye lemifanekiso anezikhala. Ayikho gimmicks ayisekho has a French-cindezela. Asetshenziswa kanjani esitatimendeni ngokuningiliziwe yokutshela. Okubalulekile, ungakhohlwa uvule ugesi. Idivayisi usebenza ngenxa yokuthi ukuthi piston lehliselwa ngokucindezela phansi futhi kanjalo umtselela wesikhatsi ikhofi phansi umfuma. Futhi phezulu uhlala isiphuzo okumsulwa, okuyinto batheleka inkomishi. Nge zonke izinhlayiya ezingadingekile ukuhlala ezansi French-cindezela. Nasi kudivayisi kahle elula newukuhlakanipha.
Ingabe ukunambitheka ayiphuze French Cindezela?
Coffee, ukwenziwa French-Cindezela, inezidingo ukunambitheka kwako ekhethekile. Ukuze kungawenza umehluko kuya iziphuzo uzilungiselele ngezinye izindlela, udinga nje zama lokhu ikhofi ubone uyayithanda yini noma cha. Phela, ukunambitheka - kuyindaba ngabanye kakhulu. Izinzuzo elingenakuphikwa French-cindezela udinga ukuthatha yona amanani aphansi, isayizi esincane (njengoba kuqhathaniswa imishini ikhofi), ukukhuluma ngendlela elula design. Ngaphezu kwalokho, kule divayisi ungenza itiye. Libuye elula kakhulu.
Ukunambitheka kanye ukuthungwa ikhofi kusukela French-cindezela wehlukile isiphuzo kusukela umenzi ikhofi noma abaseTurkey. Akayena obukhulu ngakho-ke kuvela, yebo nangokuthi cha ukufutheka. Coffee has a ukunambitheka kweqiniso futhi ukunambitheka okusanhlamvu ngokwabo. isiphuzo Amalungiselelo anjalo indlela umnene kakhulu, ukuthi ikuvumela ukuba zenzeka ngokugcwele yephunga layo. Ngaphezu kwalokho, ikhofi wenza ngale ndlela, has lemali okungenani caffeine. Kwamanye abathandi nesikuphuzayo kuyisipho kuyinkomba ebaluleke kakhulu.
Ngokuvamile, ikhofi ukwenziwa nemizuzu emihlanu. Lena ngempela ngokwanele. Nokho, kungase kube ukuhlakanipha ukuba kancane ukwandisa isikhathi sokupheka abathandi ngokweqile iziphuzo ezinamandla. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzokhulisa caffeine okuqukethwe. Ekuqaleni, isiFulentshi Cindezela yasungulwa ngqo yokuphisa, kodwa livame ukusetshenziswa ukulungiswa itiye, infusions zemithi engamakhambi ehlukahlukene kanye berry.
Indlela yenza ikhofi endaweni French Cindezela?
Lena inqubo silula. Ngokuba ukulungiswa sidinga:
induku ende noma spoon elishukumisayo.
Okokuqala, udinga siwabilise ugaye ikhofi. Izinhlamvu kugaywa ngemva nje amanzi abilayo, ngakho musa walala endaweni evulekile futhi qinani nezici zabo. Coffee lufakwa ukunambitha. Njengoba ungalindela, le spoon inkomishi yamanzi ngalinye.
Ezinhlamvwini zekhofi ugcwele French-cindezela bese nombala usigcwalisa amanzi ashisayo. Uketshezi kudingeka kakhulu ngendlela ufuna ukuthola inkomishi. Ukuze anikeze inani eliphezulu ikhofi ukunambitheka kwako, kudingeka mix it nge ketshezi - ngokushesha okukhulu nje. Ngaphezu kwalokho, isiphuzo kufanele baniketwe sikhatsi kuze yena (cishe imizuzu emibili kuya kwamahlanu) abakhona. Khona-ke kudingeka ngokulinganayo futhi kancane wehlise lemifanekiso plunger phansi phansi umfuma. Lokhu kumele kwenziwe ngokucophelela nangendlela enembile, ukuthi akukho ukuthambekela anezikhala. Kungenjalo, ikhofi yokuya phezulu bomkhumbi.
Yini ukugaya okusanhlamvu luncanyelwa French Cindezela?
Indlela yenza ikhofi endaweni French Cindezela? Lokhu kwenziwa izinto kalula. Kodwa, njengoba kunoma yiliphi ibhizinisi, kukhona ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi odinga ukukwazi ukuze uthole isiphuzo omuhle. Yiqiniso, ikhofi best ingenziwa high quality okusanhlamvu kuphela. Kodwa lapha idlala indima izinga ukudla kwabo. Coffee for French-cindezela kumele kutsho ngokulinganayo. Kukhona ngeke isebenze ngempela ezishibhile ikhofi grinder, okuyinto uzokunika nenye izinhlayiya emihle futhi indawo.
Izinhlamvu kufanele kutsho indawo noma ophansi, kodwa okubaluleke kakhulu, eyohlobo kakhulu. Ukuze kuzuzwe lokhu umphumela, kudingeka uthole lokugaya grinder ezinhle. Ngokuvamile, uma sikhuluma kanjani yenza ikhofi e-French-cindezela, kumele ukuthi kukhona eziningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ebalulekile. Ukuze uthole umphumela ephelele, kumele ube izinto ezintathu: izinga phansi fresh ikhofi, ezinhle French-cindezela bese lokugaya grinder. Lezi zingxenye ukunikeza ukulungiselela best yalesi siphuzo.
Ucabangani, kungani ikhofi kufanele kuthathwe okusanhlamvu kuphela? Impendulo ilula. ikhofi Ground iqala ngokushesha emoyeni ukulahlekelwa impahla yabo: kuyokufuze amanga, nephunga kancane futhi ukunambitheka uzohlala for isiphuzo. Nakulokhu futhi sifuna ukugcizelela ukuthi grinder ingakhetfwa nge okugaya - ke kahle kakhulu futhi ngokulinganayo igedle ubhontshisi. Idivayisi izindwani ukugaya akudingekile, inikeza nothuli oluningi futhi izinhlayiya ezincane. inhlanganisela enjalo asifanele a French-cindezela. Kubalulekile kakhulu ukufana.
Uyini French Cindezela ukukhetha lapho uthenga?
Ake ugxile kanjani ukukhetha okuhle French-cindezela. Okokuqala, sinake obandayo ingilazi igabha: ke kumelwe kuqine ngokwanele. izinkomba qualitative zedivayisi iyona ingilazi uqobo. On akufanele kube khona imihuzuko, Bubbles nokusasamba. Kungenjalo, ngesikhathi ukusetshenziswa, kungaba inqamuke. A umfuma, njengoba ungase ucabange - ingxenye eyinhloko kudivayisi.
Kukhona metal jacket ukucindezela. Bayoba kunengqondo ngaphezu, ngoba zithanda ukuba nzima ukugqashula. Kodwa-ke ngeke uze ukwazi ukubuka enqubweni yokuphisa lesi siphuzo uqobo. Ngokuphathelene ukuhlunga in idivayisi, kufanele banamathele ingilazi noma insimbi igabha ngenkathi kabuthaka nangokuthula ngokushelela ukuthutha ngaphandle tilting futhi jerks. Lokhu kuzoqinisekisa ukulungiswa isiphuzo omuhle. Ngisho naphakathi zekhofi izohlala ezansi umfuma futhi akusho ukungena engxenyeni engenhla.
ukunakekelwa ithuluzi Proper
Bambalwa ukwazi indlela yokwenza ikhofi e cindezela French. Kusadingeka bakwazi ukunakekela imishini. Njenganoma iyiphi Cookware, kumelwe kudlule yokuhlanza ezithile. Kufanele kuqashelwe ukuthi ikhofi ayikwazi agcinwe cindezela French. Isiphuzo uthola ukunambitheka embi futhi iphunga. Kufanele udliwe asanda. Ngaphezu kwalokho, idivayisi ukubamba iphunga nezingahlobene nendaba. Yingakho nje njengoba isiphuzo ukwenziwa, futhi okwamanje, kufanele uthele izinkomishi kanye French-cindezela zezikhali ngokususa kuwo piston, ugeze. Udinga ukusingatha ngokucophelela nge elithambile isipanji isibani odongeni, bagcina avele qwembe aphuzi kusuka ikhofi noma itiye. Hlunga futhi kudingeka uxubha kahle.
Yeka ukuthi luhlobo luni olukhethayo French Cindezela?
Indlela ukukhetha ikhofi? Akusiyo imfihlo ukuthi isiphuzo omuhle ingatholakala kuphela kusuka eliphezulu ubhontshisi. Ngakho, ukuze ayothatha ikhofi French-cindezela ingqondo.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi kufanele kube indawo. Nothuli ngeke zisebenze. Uma ungenayo i-grinder ikhofi noma ungafuni ukuchitha isikhathi sakho, ungakwazi ukuthenga okusanhlamvu ngomumo olwembiza. Kodwa zizwakale kahle ukubana ugaye ikhofi ngaphambi nje kokuba uthuthuva, ngoba ngokushesha ilahlekelwa impahla yayo. Yebo, futhi ayashesha ukubamba iphunga uma agcinwe. Mark ikhofi ezinhle kuzokunika imiphumela emihle kakhulu. Better ukuthatha medium eyosiwe ubhontshisi. Ngokuvamile, isiFulentshi Cindezela ungakwazi yenza a ngokuphelele yanoma iluphi uhlobo, noma izinhlobo enongiwe. Ungengeza futhi izinongo zakho ozithandayo.
Njengoba Kuyaziwa, akunakwenzeka ukuba apheke okuthile okuhle umkhiqizo yekhwalithi ephansi. Kodwa ngesikhathi esifanayo ngisho izitsha emangalisayo futhi iziphuzo ezingonakalisa ukupheka nokuwubuwula. Ngokufanayo, kuba ikhofi. Delicious baphuze awukwazi ukuphuma okusanhlamvu yisikhathi noma yekhwalithi ephansi. Kodwa futhi kulula konakalisa ukunambitheka ukulungiselela okungalungile.
Indlela ukukhetha ikhofi? Ongoti eqiniso ayazi ukuthi zemvelo kuphela inketho e ubhontshisi noma ngesimo nesando. Futhi ochwepheshe bacabanga nokuthi ochotshoziwe ikhofi kakhulu nedotyagivaet ezindinganisweni kusukela ukulahlekelwa ukunambitheka. Kunezinhlobo eziningana kabhontshisi wekhofi. Lena arabica futhi robusta. Lapho kwazalelwa khona ezihlukahlukene sokuqala eNhlonhlweni ye-Arabhiya, wesibili likhula Congo.
Mangisho ukuthi lezi zinhlobo babe izakhiwo ezahlukene. Robusta, isibonelo, alisetshenziswa nhlobo ngokwalo. Lokhu kuchazwe iqiniso ukuthi akukhona ayishilo futhi ukunambitheka ngempela nezamanchivy. Kodwa lapho exutshwe arabica unika amandla isiphuzo, futhi kuba ishibhile. Kuye ngokuthi lakhiwe kanjani nangangesihlabathi kusetshenzwe, lapho esekhulile, ukukhomba izinhlobo ayizinkulungwane eziningana ezahlukene ikhofi. Umhlaba, ilanga, amanzi kanye nomoya ezindaweni zokukhula unikeza isiphuzo ukunambitheka kwalo esiyingqayizivele kanti iphunga.
Coffees zinamagama ngokuvamile kanye imigqa ethile. Ngokwesibonelo, uma arabica Brazilian, kuba ngokushesha kucace ukuthi ukhulele Brazil. Umbuzo kanjani ukukhetha ikhofi cindezela isiFulentshi, cishe kuncike ukunambitheka yakho izintandokazi amakhono zezimali. Grain izinhlobo eziningi kangaka. Intengo lwezinhlobo eqolo ifinyelela amadola angamakhulu amathathu amakhilogramu ngalinye.
grade esihle efanelekayo ekuseni isiphuzo isikhule eKenya exutshwe Colombian. It has a ukunambitheka elikhanyayo kakhulu, lapho kukhona amanothi yobisi. Lokhu isiphuzo unalo impahla tonic. Kodwa isikhathi ntambama ingxube ezinhle Indonesia, Kenya futhi Costa ikhofi Rican. Nokho, lapho okusanhlamvu kuthiwa ngosile namandla kunomFilisti isilinganiso.
Njengoba for yokuwugazinga ke emakethe ngokuvamile eze okusanhlamvu kusetshenzwe. Ukwelapha ukushisa zingase zihluke kakhulu, futhi lokhu kunikeza ezahlukene isiphuzo ukunambitheka kanye nephunga elimnandi ezicashile esizayo. Ngokwesibonelo, degree of yokuwugazinga okusanhlamvu brown kuyakhanyisa ithinti ensundu. Ngo ikhofi kukhona Iphunga mnene namanothi we isinkwa.
yokuwugazinga American unikeza isiphuzo a ngokulinganisela ithoni ukukhanya ansundu. Ngesikhathi esifanayo ebusweni okusanhlamvu womile, ukunambitheka iyagcinwa asidi. ukuphathwa kaMasipala ukuthatha isikhathi eside kunokuba American. Grain iqala ukwambula. Nge okwengeziwe yokuwugazinga phezu kwezinye uwoyela izindawo, avele amahlamvu asidi, kukhona ukunambitheka enamandla egcwele elikhanyayo.
ukuphathwa Vienna kwenza okusanhlamvu ngokucace nakakhulu. Amafutha phezu kwenzekani ungazenzi. On ulwanga kukhona ukufutheka kancane. Gcwalisa isikhala we ikhofi unamandla kakhulu. Lapho yokuwugazinga espresso nephunga iba buthaka, futhi ukunambitheka ukufutheka ngaphezulu. ukwelashwa French kwenza okusanhlamvu cishe abamnyama. I evelele ukunambitheka inothi - ukufutheka. Futhi-ke, yokuwugazinga Italian kwenza ikusasa isiphuzo munyu kakhulu nge zhzhonymi shades.
Uma uncamela ukuthola uhlobo phansi, khumbula: kuba nenkululeko kubaluleke kakhulu. Coffee for French-cindezela kuyadingeka ukuthatha ezinkulu noma naphakathi. Futhi ezimaholoholo isetshenziswa ukwenza isiphuzo e Turku. ukusetshenziswa Isilinganiso yemishini ikhofi kanye nezincane - ukulungiswa ikhofi ezidumile Turkish. Ngokuvamile, i-choice ikhofi - a ndaba ebucayi. Ncika ukunambitheka yakho siqu.
Kungenjalo, uma ukhetha okusanhlamvu ungahlala ngesikhathi abadumile ikhofi "Lavazza". Yena uphelele ukulungiswa French-cindezela. Lena brand bendabuko isiNtaliyane, has nenhlalakahle eside emakethe emhlabeni. Coffee "Lavazza" ezingaphezu kuka eyikhulu ukujabulisa yayo imikhiqizo amakhasimende. Le nkampani kakhulu sensitive izintandokazi ukunambitheka abathengi, ikhumbula izifiso zabo, eqondisa ucwaningo ukuze compounds okusha okuthuthukisiwe. Asetshenziswe ekukhiqizeni eliphezulu izinhlobonhlobo okusanhlamvu, yokuwugazinga ezikhethekile futhi uphawu cleaner emaphaketheni, okuyinto ebaluleke kakhulu, njengoba kuqinisekisa kulondolozwe ukunambitheka kanye nephunga elimnandi.
Okunye brand of ikhofi
Ngaphezu kwalokho, ukuba brand best kabhontshisi wekhofi zihlanganisa Jardin. Yena imelelwa izinhlobo eziningana ntshashintshe ukwelashwa ukushisa. ngenxa yokuthandwa kwayo, kungenxa zamanani ezinengqondo futhi zizwakale kahle. brand Kahle kungase kutholakale efana Paulig, Kimbo, Gut, Gaggia, Malongo, «ikhofi esheshayo". izinga nawufuna okusanhlamvu EvaDia. Sha ushibhile kakhulu 'Lavazza ", kodwa akuyona eliphansi in ukunambitheka kanye nekhwalithi esincintisana yayo, njengoba umklami usebenzisa izinhlobo isibili, okwenza ikhofi best.
Zonke brand kokungaphezulu azinake. udumo lwawo nge abathengi liyazikhulumela. Ngokuvamile, okungcono yilezo brand bayakwazi ukunikeza abalandeli isiphuzo omuhle at Adalberto ngentengo ephansi. Izame futhi wenze ikhofi e-French-Cindezela bese hlola izimo zawo. Mhlawumbe nawe uzoba fan of ukupheka isiphuzo emangalisayo ngale ndlela.
Ipohsky "amhlophe" ikhofi: incazelo, izicelo kanye zokupheka
Izinga eliphakeme kunawo kwamagilebhisi Okunhlobonhlobo Gourmet: incazelo, ukubuyekezwa
LTI-Mahdia Beach 4 * (Tunisia / Mahdia): izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa